Iyo nyowani Raspberry Pi 4 inopisa nekukurumidza uye inoda fan | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani Raspberry Pi 4 inopisa nekukurumidza uye inoda fan
Munguva yemwedzi uno Raspberry Foundation yakazivisa yayo itsva Raspberry 4 bhodhi iyo yakauya nemutengo mumwe chete neshanduro yayo yapfuura asi ichiwedzera kuvandudza kwakawanda (Unogona kutarisa chinyorwa pano).
Mushure memashoko ehunhu hwayo kune veruzhinji, matambudziko akasiyana akatanga kuziviswa yakabatana neRaspberry 4 uye ndeyekuti wekutanga wavo aive ine matambudziko ane chekuita ne USB Type-C tambo, nekuti havazi vese vaivaziva sesimba renyanzvi asi seimwezve yekuwedzera (odhiyo) Ikozvino kumwe kudonha nebhodhi iri kwave kuzivikanwa.
Uye ndizvo izvozvo mushandisi anonzi Jeff Geerling, inonongedza kuti ikozvino Raspberry 4 inoda inotonhorera sosi (fan).
“Ndanga ndichishandisa Pi yezvirongwa zvakati wandei kubvira payakaunzwa muna2012, uye nemamodeli mazhinji, kusanganisira iyo diki Pi Zero uye dzakasiyana A + kudzokororwa, hautomboda fan kuti udzivise kupuruzira.
Uye yekupisa yekufungidzira kana zviyero zvechivara uchishandisa infrared thermometer kazhinji yakaratidza iyo SoC inoburitsa yakanyanya kupisa.
Nekudaro, iyo Raspberry Pi 4 yakasiyana nekuti iyo processor haingori inopisa chete, kunyangwe pasi peyakajairwa mutoro, asi kune zvimwe zvikamu pabhodhi izvo zvinopisa kusvika pakusave nyore kubata.
Heino mufananidzo unopisa wakatorwa neyako yekupisa yekufungidzira kamera, iyo inoratidza zvikamu zveiyo Raspberry Pi 4 iyo inogadzira kupisa kukuru mushure memaminitsi mashanu.
Vazhinji venyu vangafunga izvozvo kudziya kwebhodhi kwakajairika uye mune zvakajairwa mamiriro hongu, asi mune iyo Raspberry Pi 4 inodarika miganho ye "zvakajairika" kudziya Kwete chete iyo inokutadzisa iwe kuwana iyo yekumhanyisa kumhanyisa iyo iyo processor inogona kupa, asi zvakare zvinoreva kuti zviitwa zvako zvinotora nguva yakareba, pamusoro pekusvika pakumanikidzwa kwevashandi tembiricha inowedzera zvakanyanya uye inogona kukanganisa izvo zvikamu mukureba kwenguva.
Izvi zvinoratidza kuti zvikamu zviri mukati meRaspberry Pi (kazhinji ingori processor, asi pamwe vamwe) vari kupisa zvakakwana kuti vasvike yavo yemukati kuchengetedzeka miganhu.
Iyo processor yaive zvakare ingangoita 60 ° C, Kunyangwe muchidimbu iyo simbi yekumisikidza inobatsira kupatsanura kupisa uku kutenderedza mukombero uye mumufananidzo weIri, kupisa kuchipenya kubva kumusoro kweiyo CPU.
Iyo yakajeka machena nzvimbo muzasi kuruboshwe Jeff anoti chikamu ichi chekadhi chinowanzoburitsa yakawanda kupisa. uye izvo zvinoriumba munzvimbo ino hazviparadzi zvakanyanya senge processor.
Chekupedzisira, anotaura kuti kana paine chero chiitiko muzviteshi zveUSB, chikamu ichi chinosvikawo 60 uye 70 ° C.
Kunyangwe ichangoburwa sisitimu yekuvandudza (Raspbian) inogona kubatsira kuchengetedza iyi chip kuti itonhorere, icharamba ichipisa pasi mutoro.
«Wobva wafungidzira kuti unonyatsoshandisa iyo P 4 pachinzvimbo chekomputa yedesktop, iine USB 3.0 yekunze hard drive yakabatana, WiFi yakabatana uye ichitamisa yakawanda data, USB kiyi uye mbeva pamwe neakawanda-hwindo basa pane browser. , chinyorwa chemavara uye mutambi wemimhanzi.
Huwandu hwemutoro hwakakwana kukonzeresa kuti processor ikurumidze pasi pemaminitsi gumi.
Nekudaro, Jeff anoti kutarisa mavhidhiyo, kupuruzira kuburikidza nemasaiti akaomarara uye kazhinji kuchinjisa mashandisirwo zvinowanzo kukonzera processor kuti ikurumidze kusvika patembiricha inosvika pamadhigirii makumi masere Celsius, kunyanya kana iri mune yakasarudzika yakavharirwa yakazara, isina kuvharwa epurasitiki Nyaya.
“Kune bvunzo dzangu dzepamutemo, ndakatanga kumanikidzira –cpu 4 kuti processor iite basa rakawanda, ichienderera. Mushure memaminetsi mashoma, ndichishandisa vcgencmd measure_temp uye »Vcgencmd get_throttled, ini ndaigona kuona kuti processor yakatanga kudzikira payakangosvika 80 ° C (176 ° F)»
Pakupedzisira Jeff akagovana vhidhiyo yekuti ungawedzera sei fan (fan) kune iyo Raspberry Pi kesi uye nokudaro kugadzirisa iri dambudziko.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa kuburitswa kwayo mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo nyowani Raspberry Pi 4 inopisa nekukurumidza uye inoda fan
Ferdinand Bou akadaro
Mutsara unoti "unoda fan kuti udzivise kudzikira" zvinoreva fan kana mutsigiri akasimba
Pindura Fernando Bou
Iyo itsva vhezheni yeQ4OS 3.8 inosvika yakavakirwa paDebian 10 uye nezvimwe
EvilGnome, nyowani uye isingawanzo malware inobata Linux, kana iwe uchifunga kuti wakachengeteka